Azo atao tsara ihany koa izany eo amin'ny Rovan'Antananarivo, fa tsara hatrany raha mifampihera sy mifampiresaka amin'ireo voakasika mivantana amin'izany, hitandroana ny fady sy ny fomba. Io tsy fahampian'ny fifampiresahana io hatrany no manimba zavatra eto amintsika.
Na an'ny Malagasy aza ny Rova, dia manan-tompo alohan'ny Malagasy rehetra ny Hasin-drazana ao, ka aoka tsy atao tery vaimanta fotsiny ny asa rehetra atao ao.
Tsara ilay finiavana sy kajy hoe 500 000 ny isan'ny mpitsidika vahiny andrasana amin'ny taona 2023, izany hoe 500 000 mpizaha-tany/365j = 1 370 mpizaha-tany isan'andro, izany hoe fiaramanidina Airbus A320/300 feno mpandeha 350 in'efatra isan'andro izany.
Tsara ny vina fa betsaka ny zavatra takiana amin'ny fisian'izany fiaramanidina 4 isan'andro avy any ivelany izany hitondra mpizaha-tany. Air Madagascar manana Airbus 2 mampitohy an'i Paris sy Chine, ary matetika simba ireo fiaramanidina ireo.
Ny sarany Tana-Paris-Tana dia 1200 euro any, 60% n'io hetra sy haba avokoa, izany hoe karama 1 volana any Frantsa raha olona tsotra, ka raha fianakaviana telo mianaka izany dia karamany 5 volana ao anatin'ny taona no ho laniany. Asa hanao an'izay ve izy? Etsy Tunisie 400euro, saran'ny fiaramanidina miampy 8 andro hiatohana hotely.
Ataovy ny kajy.